Kudzokera kuSizzle: Sei E-Commerce Vatengesi Vanogona Kushandisa Kugadzira Kuti Kuwedzere Kudzoka | Martech Zone
Apple's zvakavanzika zvigadziriso zvakachinja zvakanyanya maitiro e-commerce vatengesi vanoita mabasa avo. Mumwedzi kubva pakaburitswa, chikamu chidiki chete chevashandisi veIOS vakasarudza kupinda mukutsvaga ad.
Zvinoenderana neazvino Chikumi update, vamwe 26% yepasi rose vashandisi veapp vakabvumira maapplication kuti avatevere paApple zvishandiso. Huwandu uhu hwaive hwakaderera zvakanyanya muUS nekungosvika gumi nematanhatu%.
Pasina mvumo yakajeka yekutevera zviitiko zvemushandisi munzvimbo dzese dzedhijitari, akawanda ehurongwa hwemushandirapamwe uhwo vashambadzi vakasvika pakuvimba nawo havachagoneki. e-commerce vatengesi vanozove nenguva yakaoma zvakanyanya sezvo hunyanzvi hwekugadzira hwavakasimudzira kuyeuchidza vashandisi nezvezvigadzirwa zvavakatarisa kana kusiiwa mumangoro avo zvakatsikirirwa.
Yakayedzwa uye yechokwadi ad yekutevera nzira haiwire munzira zvachose, asi ivo vanochinja zvakanyanya. Kukosha kwetraffic inogonesa kugona kudzikamisa ad tracking (LAT) iri kukura munyika yepashure pe-14.5, uye mibairo yakavandudzwa yavari kupa inoenderana neLAT traffic inokurudzira vatengesi kubhejera zvakanyanya kupfuura zvavaimboita kare. Kuti utore mukana weaya uye mamwe maitiro, e-commerce vatengesi vanozofanira kuchinja maitiro avo ekushambadzira ekugadzira. Hedzino dzimwe dzenzira dzekutanga dzekugadzira dzinoramba dziri chishandiso chakakosha chekubudirira kwe e-commerce, uye matipi evashambadziri vanotarisa kuti vawedzere kudzoka kwavo pakushandisa ad sezvo shanduko idzi dzichiita.
Kushaikwa kwedata remushandisi kunoda kugadzira nekukwezva kwakakura
Yakanaka uye yepakutanga dhizaini inozobatsira mabhureki kuzvisiyanisa mukati memusika wakazara vanhu, kunyangwe pasina kushandisa ekunangisa maturusi. Ndichiri kuyedza kuwana kusvika kukuru, mabhizinesi anowanzo shandura dhiza uye generic ads. Asi kukanda mambure akafara hazvifanirwe kureva dhizaini. Kana iwe usingakwanise kuvimba nekusvika kune mumwe munhu, kugadzira kwako kunofanirwa kuve kusingadzivisike kune vanhu vazhinji kamwechete. Vashambadziri vanodyara mune yakasarudzika kugadzira vanova nenguva iri nyore yekutora kutarisisa uye kutsvaga vatengi vatsva panzvimbo yakafararira yebhero curve.
Ad yekugadzira inopawo mukana wekutaurira hunhu hwemhando yako kunyika. Kune akawanda mabhureki, izvo zvinoreva kubatanidza zvinobata maziso nemeseji ine simba. Kusavapo kwe data-level data kunoita kuti zvinyanye kukosha kuti vashambadziri vaunze zvine hukasha, vachishandisa yakajeka brand izwi kuendesa zvisingakanganwike zviitiko zvevatengi. Vashambadziri vanofanirwa kutarisisa mameseji anobatanidza maitiro emhando nehupenyu hwevatengi. Fungidzira kuti chero munhu anoona yako yekugadzira ad ari kusangana nemhando yako kekutanga; chii chinofanira kuziva mutengi nezvekambani yako? Kudzikamisa mameseji akajeka, ane simba nemaitiro ekutaura nyaya anonyandura kuti aite fungidziro isingaperi. Sezvo chirevo chekare chekutengesa chinoenda: usatengese steak, tengesa sizzle.
Shingairira kuedza kwehupenyu kubatana nevatengi pavanenge vari
Vatengi vemazuva ano vanotarisira kukwanisa kutaurirana uye kutaurirana nema brand nezve izvo zvakakosha kwavari. Kubudirira kwekugadzira kunobvumira mabhureki kuti ape iyo mhando yeruzivo rwekutaura kuburikidza ne organic mazano senge social media. Semuenzaniso, akawanda masocial media mapuratifomu anopa vashandisi sarudzo yekuzvipira kune imwe demographic data kubatsira kuvandudza ruzivo rwavo. Kubatana nevatengi kwavanenge vachitoungana hakuna-brainer, uye mapuratifomu 'akabikwa-mune akakosha ekunongedza masimba anobatsira kudzoreredza humwe huwandu hwevanhu hwakarasika pasina kuteedzera ad. Vatengi zvakare vanopihwa simba rakawanda kupfuura nakare kose rekuvhota nezvikwama zvavo, saka vashambadziri vanofanirwa kudzidzisa hunyanzvi hwavo - uye nhaurirano dzinokurudzira - nemaonero uye pfungwa yehunhu hwekambani.
Tsiva kurudziro inoenderana nezvigadzirwa zvakakurumbira
Matanho matsva ekuvanzika eApple achamisa kugadzirisa zvakakurudzirwa zvechigadzirwa zvinoenderana nemaitiro ekare evatengi kune chero munhu anoremadza kuteedzera. Panzvimbo pezvigadzirwa zvakafanana, vashambadziri vanofanirwa kutarisa kune zvinofarirwa. Ad yekugadzira inosimudzira zvigadzirwa zvinotengeswa zvakanyanya inoita kuti uise mari yehungwaru nekuti inofumura vese vangangove vatengi uye varipo kune zvinhu zvaunoziva zvinofambisa tsono yebhizinesi rako.
Mafungiro emombe anopa vatengi kuvimba nemhando nyowani uye anovaita kuti vakwanise kutenga zvigadzirwa zvinofarirwa nevezera ravo. Ndosaka kuratidza vatengesi vepamusoro-soro mune yako yekugadzira ad inzira yakanaka yekuwedzera kuvimba uye kutungamira vatengi vatsva kuburikidza nekutengesa funnel, kunyangwe pasina yakadzama data mapoinzi ekuti ndivanaani uye nezvavanoitira hanya.
Simbisa makiyi anosiyanisa uye akasiyana echigadzirwa maficha
Mabhureki anogona zvakare kubata kusavapo kweruzivo rwakadzama nezve vangangove vatengi semukana wekusimbisa iwo akakosha masiyanisi anoita kuti zvigadzirwa zvavo zvive zvakakosha. Kuongorora data rekutengesa kuchabatsira mhando kuona chinoita kuti zvigadzirwa zvavo zviyeuke. Ipapo iwe unokwanisa kuvandudza dhizaini inosimudzira izvo zvinhu, senge zvigadzirwa zvinomhanya-kusvika-saizi, cheni yekutenga inoenderera, kana kushandiswa kwezvinhu zvakadzokororwa.
Kuteerera kune vatengi vako nezve izvo zvinopindirana navo zvakare izano rinobatsira; ongororo yevatengi vangu uye kubatanidzwa kwesocial media kune yakasarudzika ruzivo mune izvo vatengi vanoda nezve brand yako uye gadzira kugadzira kunopemberera hunhu ihwohwo. Uye usatye kuzembera mumapoinzi ekusiyanisa akakurudzira vatengi vekare kuti vave vakavimbika mucherechedzo chaiwo, zvisinei kuti vasingatarisirwe sei.
Creative ichave isina kunyatso kurongedzerwa uye kushoma chaiyo mune post-14.5 nyika. Asi kunyanya sezvo ad yekutevera yekutevera yekupinda mareti kukwira uye kugamuchirwa kunowedzera kweIOS 14.6 uye kupfuura, kugadzira kuchave chinhu chakakosha chevashambadziri vari kutsvaga kubatana nevatengi vatsva uye kubudirira kune vasingazivikanwe vateereri. Sezvinoita nezvese hunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji, shanduko ndiyo nzira yekumberi. Kuti vashambadziri vabudirire, vanozofanirwa kuchinjika nekushandura manzwisisiro avo ekugadzira uye akawanda ane simba maapplication.
Tags: apple privacykutsanziecommerceecommerce vatengesiecommerce kushambadziraiosLAT trafficdzoka pane kushambadzira shandisakudzokera pakusika